DEG, DEG Qarax xoogan oo ka dhacay Beledweyne. – Bulsho News
DEG, DEG Qarax xoogan oo ka dhacay Beledweyne.
Beledweeyne-KNN-Wararka ka imaanaya Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in Goordhaw uu halkaasi ka dhacay Qarax jugtiisa inta badan laga maqlay Xaafadaha Magaaladda Beledweyne.
Qaraxa ayaa ka dhacay Baar xasan dhiif oo ku yaal bartamaha Magaaladda baladwayne ee Xarunta Gobolka Hiiraan, Sidoo kalena ah goob bulsho ay ku kulanto, laguna qabto Shirarka waaweeyn, waxaana isku qarxiyey sida ay xaqiijiyeen Ilo wareedyo kala duwan, Qof watay Jaakadaha Qarxa, Waxaa jiro Khasaaro Dhimasho iyo Dhawac leh in kastoo aan la xaqiijin karin.
la soco Faah-faahinta Qaraxa,